Dr. Tint Swe's Writings: Psoriasis အရေပြားနာတမျိုး
၁။ Psoriasis ရောဂါရှင် အမျိုးသမီး အပျို အသက်(၃၂)နှစ်ပါ ဝေဒနာဖြစ်နေတာ(၁၇)နှစ်ခန့်ကြာပါပြီ။ Psoriasis ရောဂါမှန်းသိတာ (၃)နှစ်နီးပါးလောက်ဘဲ ရှိပါသေးတယ်။ Methotrexate ဆေးကို သောကြာနှင့်စနေ ညတွေမှာ သောက်နေရပါတယ် ဆေးသောက်ရင် ခေါင်းကိုက်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို မတည့်တဲ့အစားအစာ မေးတော့ မရှိပါဘူးလို့ဘဲ ပြောပါတယ်။ ဆရာ post မှာ အချဉ်သီးနှင့် မုန်လာဥနီ မစားဘဲ ရှောင်ရမယ်လို့ တွေ့ပါတယ်။ အချဉ်/အစပ် ကြိုက်တတ်တော့ အချဉ်ထည့်ချက်တဲ့ဟင်း မရှိရင် သံပရာသီးစိတ် တို့စားမိတယ် သွေးအားနည်းတော့ ဥနီကို မကြာခန စားဖြစ်တယ် မတည့်တာမှန်းလည်း မသိလို့ပါ။ အချဉ်က ဘာကြောင့်မတည့်တာလဲ? အချဉ်ကို ရှောင်ရမှာ ဆေးသောက်တဲ့ နှစ်ရက်ဘဲလား အမြဲတမ်းရှောင်ရမလား သိချင်လို့ပါ။
၂။ ဆရာရှင့် သမီးအသက်က နှစ်ဆယ်ရှိပါပြီ။ သမီးငယ်ငယ်လေးတည်းက psoriasis ရောဂါခံစားနေရတာပါရှင့်။ မျိုးရိုးလဲရှိပါတယ်။ အမျိုးတွေကအိမ်ထောင်ကျပြီးမှဒီရောဂါကပျောက်တယ် သွေးသားနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သွေးမသန့်တာလို့လဲပြောပါတယ်။ အဲ့ရောဂါက အိမ်ထောင်ကျတာနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိလို့လားရှင့်။ အမျိုးတွေကတော့ အရှင်းပျောက်နေကြပါပြီ။ သမီးကတော့အိမ်ထောင်မရှိသေးပါဘူးရှင့် ရောဂါကငယ်ငယ်ထဲကကုသလို့မရလို့ အရမ်း စိတ်ဓာတ်ကျရပါတယ်။ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် နှင့် ကုသလို့ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်ရှိရင် ကူညီပေးပါရှင့်။ သမီးရဲ့ရောဂါ ပုံစံကတော့ အသားကအမြဲတမ်ယားပါတယ်။ သွေးထဲကယားတာပါ။ ကုတ်လိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ခြင်ကိုက်လို့ကုတ်မိရင်ဖြစ်ဖြစ် အနာတေဖြစ်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ပွားပါတယ်။ အရေခွံတေလဲကွာပါတယ်။ အနာတေကအရမ်းပွပြီး ဆယ့်နှစ်ရာသီ မပျောက်လို့ဆရာ။ ဆေးတွေလည်းစုံနေပါပြီ။ တခါတလေ ပြည်တည်နာတွေလဲဖြစ်ပါတယ်။ သမီးရဲ့ရောဂါ အခြေအနေကို ဘလိုခေါင်းစဉ်တပ်ရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဖူး။ အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျရပါတယ်။ သင့်တော်မယ့် နည်းလမ်းလေးများ မျှဝေပေးပါအုံး ဆရာရှင့်။
ရရစ်မပါတဲ့ ပြီတွေ ပြီးတွေကိုပြင်လိုက်တယ်။ ဝဆွဲမပါတဲ့ တတွေကိုပြင်လိုက်တယ်။ ဆောရီး။
၃။ ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော် အသက် ၃၇ အရင် ASO များလိုမေးဖူးပါတယ်။ ဒီနေတော့ ပါရဂူ (မလေးရှား) သွားပြဖြစ်တယ်။ ဆရာဝန်က စစ်ဆေးပြီးတော့ psoriasia နဲ့ psoriatic arthritis လိုပြောပါတယ်။ နောက်တခါ ထပ်ပြရဦးမှာပါ။ အဲဒီရောဂါအကြောင်း သိချင်လိုပါ။ ဆေးစစ်တဲ့ စာရွက်တွေ မထည့်တော့ဘူး။ ဆရာ အလုပ်ရှုပ်မှာဆိုးလိုပါ။
အလုပ်ရှုပ်မှာစိုးလို့ လို့ရေးရတယ်။ စိုးရိမ်။ ဆိုးဝါး။
၄။ အသက် ၄ဝ အရွယ် အမျိုးသားပါဆရာ။ ဖြစ်တာ ၅ နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ psoriasis ကိုဆိုလိုတာပါဆရာ။ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါလားလဲ သိချင်တာပါဆရာ။ ဆေးသောက်လိုက် မသောက်လိုက် ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ။ ထိုင်းကထုတ်တဲ့ yong hein ဆိုတဲ့ဆေးကို သူများတွေညွှန်တော့ သောက်တာ ပိုဆိုးလာပါတယ်ဆရာ။ ထိုင်းကဆေးကတရုတ်တိုင်းရင်းဆေးတဲ့ဆရာ။ ပျောက်တာကတော့ ၉၆ ပါးလောက်နီးနီး ပြောတာဘဲဆရာ။
Psoriasis ဆိုရီယက်စစ် ခေါ် အရေပြားနာတမျိုးဆိုတာ နှင်းခူလိုလိုဆင်တယ်။ အပေါ်ယံမှာခပ်ဖြူဖြူ ငွေရောင်ရှိတယ်။ ဦးရေခွံ၊ တတောင်ဆစ်၊ ဒူး၊ ခါးတွေမှာအဖြစ်များတယ်။ ဖြစ်လိုက်-ပျောက်လိုက် နေတယ်။ ဘာလို့ဖြစ်လဲ မပြောနိုင်ပါ။ လိမ်းဆေး၊ သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေး၊ အလင်းရောင်သုံးကုသနည်းစသဖြင့် ကုနည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ သူများကို မကူးစေ။ မျိုးရိုးလည်းမလိုက်ပါ။ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့လည်း မဆိုင်ပါ။ တိုက်ဆိုင်မှုအရ ကောင်းတာ ဆိုးတာ ရှိနိုင်တယ်။
Pityriasis Lichenoides အရေပြားနာတမျိုးဆိုတာ ဘာလို့ဖြစ်သလဲအတိအကျမသိပါ။ မျိုးရိုးမလိုက်ပါ။ ပျောက်ဘို့ရာလဲ ဆရာဝန်အားလုံးက သဘောတူလက်ခံထားပြီးသားကုထုံး မရှိသေးပါ။ အင်တီဘိုင်အောတစ်ပိုးသေဆး ၁ လပေးတာက ပိုးဝင်နေတာကိုတော့ သက်သာစေတယ်။
Special ultraviolet light lamps အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ကုတာလဲတချို့မှာကောင်းစေတယ်။ Phototherapy အလင်းရောင်သုံးကုသနည်းလို့ ခေါ်တယ်။ လှိုင်းအလျားမတူတဲ့ UVB ဒါမှမဟုတ် UVA အလင်းရောင် သုံးတယ်။ Psoralens သောက်ဆေး + UVA တွဲသုံးတာလဲလုပ်တယ်။ Photochemotherapy လို့ ခေါ်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတော့ရှိမယ်။ Methotrexate tablets ကင်ဆာအတွက်သုံးတဲ့ဆေးကိုလည်း စမ်းသုံးနိုင်တယ်။
Phototherapy အလင်းရောင်သုံကုသနည်းက ယာယီသဘောသာ သက်သာစေနိုင်တယ်။ ဒီနည်းနဲ့ မရသေးရင် PUVA နည်းကိုသုံးတယ်။ ပိုမြင့်တယ်။ Fluorescent light bulbs မီးလုံးတွေကိုသုံးတယ်။ တပါတ်မှာ ၂-၅ ကြိမ်လုပ်တယ်။ စုစုပေါင်း ၁၅-၃ဝ အကြိမ်လုပ်တယ်။ အစပိုင်းမှာ ၁ မိနစ်တောင်မကြာဘူး။ နောက်မှာတိုးသွားစေတယ်။ မျက်စိကို မထိစေဘဲ ရောဂါအနာရှိတာတွေကို အလင်းရောင်ပေးတယ်။ ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါဆိုလဲ အကာကွယ်ထားပေးရတယ်။ PUVA treatment နည်းမှာ Psoralen ဆေးပြားကို အလင်းရောင်မပေးခင် ၂ နာရီကြိုတင်သောက်စေတယ်။ ဒါမှမဟုတ် lotion or gel ဆေးရည်သုတ်လိမ်းပေးလို့လဲရတယ်။ ဒီဆေးသုံးသူတွေကသဘာဝနေရောင်ကာကွယ်ဘို့ ၂၄ နာရီကြာ နေကာမျက်မှန် တပ်ထားရတယ်။
ဆေးကုသရက်မှန် မလာနိုင်သူ၊ ၁ဝ မိနစ်အထိအချိန်မပေးနိုင်သူ၊ နေရောင်ကြောင့် အနာကပိုဆိုးတတ်သူ၊ xeroderma pigmentosum or lupus erythematosus အရေပြားရောဂါရှိနေသူ၊ skin cancer အရေပြားကင်ဆာရှိနေသူ၊ ciclosporin or methotrexate ဆေးတွေသောက်နေရသူတွေက ဒီကုသနည်းနဲ့ မတိုက်ဘူး။ ဆေးကုနေစဉ်မှာ Perfumed products ရေမွှေး မသုံးသေးဘဲနေသင့်တယ်။ အချဉ်သီး၊ မုံလာဥနီမစားဘဲ ရှောင်နေရမယ်။ အစားအသောက်ကြောင့် ပိုဆိုးစေသူတွေမှာသာ အစားအသောက်ကို သတိထားရန်လိုတယ်။ ဆေးခန်းကသုံးတဲ့ အလှအပသုံး အရည်တွေကလွဲရင် Creams, ointments and lotions တွေကိုရှောင်ထားသင့်တယ်။ ဆံပင်တိုတာ ပိုအဆင်ပြေမယ်။
• Topical corticosteroids စတီရွိုက်ဆေးပါလိမ်းဆေးများသုံးရင် ခံစားနေရတာ၊ မြင်နေရတာတွေသက်သာစေတယ်။ ရောဂါကိုအမြစ်ပြတ်အောင်တော့ လုပ်မပေးနိုင်ပါ။ အသင့်အတင့်သာဆိုးတာအတွက်သုံးတယ်။ ပြင်းအားအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ တာရှည်မသုံးသင့်ပါ။ သုံးလိုက် နားလိုက်လုပ်ရတယ်။
• Vitamin D analogues လိမ်းဆေးကနေ မူမမှန်ဆွဲလ်တွေဖြစ်လာမှာကို နှေးစေမယ်။ Calcipotriene (Dovonex) နဲ့ Calcitriol (Rocaltrol) ဆေး။
• Anthralin ဆေးက အနာဖေးတွေကိုကွာကျစေမယ်။
• Topical retinoids ဆေးတွေ ဥပမာ tazarotene (Tazorac, Avage) ရောင်ရမ်းတာကိုသက်သာစေမယ်။
• Calcineurin inhibitors ဆေး ဥပမာ tacrolimus (Prograf) နဲ့ pimecrolimus (Elidel) တွေက ရောင်နေတာကို သက်သာစေမယ်။ တာရှည်မသုံးသင့်ပါ။
• Salicylic acid သေနေတဲ့ဆဲလ်တွေကိုကွာကျစေမယ်။
• Coal tar ခြောက်တာ၊ ယားတာ၊ ရောင်တာတွေကို သက်သာစေမယ်။
• Moisturizers ဆေးက အစိုဓါတ်ပေးမယ်။ အနေရခက်တာသက်သာစေမယ်။
• Light therapy (phototherapy) အလင်းရောင်ပေးကုသနည်းလည်းလုပ်တယ်။
• Sunlight. Ultraviolet (UV) နေရောင်နဲပလည်းကုသတယ်။
• UVB phototherapy ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နည်းလည်းလုပ်တယ်။
• Narrow band UVB therapy နည်းလည်းလုပ်တယ်။
• Goeckerman therapy နည်းလည်းလုပ်တယ်။
• Excimer laser လေဆာနည်းလည်းလုပ်တယ်။
• Retinoids ဆေး ဥပမာ acitretin (Soriatane) ဆေး။
• Methotrexate ဆေး။
• Cyclosporine ဆေး။
• immunomodulator drugs ဆေး ဥပမာ etanercept (Enbrel), infliximab (Remicade), adalimumab (Humira) and ustekinumab (Stelara) ဆေးတွေ။
ရေတိုမှာ နေလောက်ခံထားရသလိုနေမယ်။ အရေပြားခြောာက်သွေ့ပြီးယားမယ်။ အရေပြားအနီကွက်ဖြစ်မယ်။ Cold sores အနာတမျိုးပေါက်နိုင်တယ်။ ကိုယ့်အနာနေရာမှာ မီးလောင်ဖူးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ရေရှည်မှာ အရေပြားက ပိုပြီး ရင့်အိုမယ်။ အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်မလားမပြောနိုင်ဘူး။ ဒီလိုပျောက်နိုင်ခဲတဲ့အနာရောဂါတွေဆိုရင် ဆေးတွေကများတယ်။ ကြော်ငြာဆေးတွေကလည်းပေါတယ်။ တခုကိုမှ အာမမခံနိုင်ပါ။ ဆောရီး။